Nezvedu - Baoding Jizhong Pharmaceutical Boka
Semubatsiri weJizhong Pharmaceutical Group, Hebei Teamtop Pharmaceutical Co, Ltd inonyanya kuita mukushambadzira kwekunze pamwe nekutengeserana kwenyika yose kwezvinhu zvese zvakagadzirwa neBoka.
Yakatangwa muna 1992, Jizhong Pharmaceutical Group yanga ichitungamira iyo veterinary mushonga indunyarara kweanopfuura makore 27. Semunhu mukuru wehuku mishonga inopa uye Top 3 veterinary mushonga wekugadzira muChina, isu tiri yenyika yepamusoro-bhizinesi bhizinesi uye inozivikanwa mukurumbira muindasitiri iyi. Isu tinonyanya kugadzira Albendazole Bolus, Albendazole Suspension, Enrofloxacin Injection, Oxetetracycline Injection, Ivermectin Injection, GMP mishonga & yezvipfuyo uye nezvimwe ...
Iine 6 GMP-yakagadziriswa zvigadzirwa zvigadzirwa, 14 musangano uye 26 yekugadzira mitsara, Boka rakagadzira huwandu hwezvigadzirwa zvakakurumbira kumativi ese China nemisika kunze kwenyika. Parizvino takavaka nzira yakakura, yakawanda-uye inoshanda yevatengi yakafukidza 4000 vatengesi vakavimbika, 60000 culturists, 2500 mapurazi makuru ekubereka uye mapoka makumi mashanu neshanu ekuberekesa, tichigadzira hukama hwekubatana ne90% yemakambani makuru ekuberekesa muChina uye kutumira kuSouth America, Southeast Asia, Africa uye Middle East.
2014, Chinese Herb Mushonga we Animal Use engineering & Technology Center yeHebei Province yakatenderwa.
2013, Baoding Jizhong Biological Technology Co, Ltd yakatanga kuvaka.
2012, Hebei Teamtop Pharmaceutical Co, Ltd yakavambwa ikaiswa mushe. Tianjin Haowei Biological Technology Co, Ltd yakatanga kuvaka.
2011, Shijiazhuang Chemical Center yakavambwa ikaiswa mukushanda.
2009, Tianxiang Biological & Pharmaceutical Co, Ltd uye Sunlight Herb Co, Ltd yakapfuura kuongororwa kweGMP & kugamuchirwa neHurumende Yezvekurima.
2008, Beijing Jiucaotang Research Center yakavambwa.
2007, Jizhong International Trading department yakavambwa.
2006, mashanuworks uye 7 yekugadzira mitsara yakasangana yakasimba GMP miitiro.
2003, Jizhong yakava kambani yekutanga muChina vakapfuura GMP (static) pamwero mukuru.
1993, Jizhong Pharmaceutical Co, Ltd yakaiswa mukugadzirwa.
1992, Jizhong Pharmaceutical Co, Ltd yakanyoreswa uye yakatanga kuvaka.
Ticharamba tichitungamira indasitiri iyi, tichizvipira kutevera “kurumbidzwa zvikuru nenzanga, inoremekedzwa zvikuru nevabati pamwe nevashandi”, uye toita nhamburiko dzekuve kambani hombe yeboka revashandi nehunyanzvi, mukurumbira uye kuvimbika, tichichengetedza indasitiri yemazuva ano inobereka.